Momba anay - Zhejiang AHEM Auto Parts Co., Ltd.
Tongasoa eto amin'ny AHEM
Zhejiang AHEM Auto Parts Co., Ltd. natsangana tamin'ny taona 1993, dia mpanamboatra matihanina amin'ny singa fanidiana fiara. Any amin'ny Fengqiao Town Industrial Park, Zhuji, Zhejiang no misy azy. Ny orinasa dia mandrakotra velarantany 13000m², manana mpiasa maherin'ny 50 ary mirehareha amin'ny fizotry ny famokarana mandroso sy ny fitaovana fitiliana feno toy ny casting casting, stamping, fitaovana milina CNC, ny fitsaboana ny vokatra ary ny tsipika fivoriambe.
Maherin'ny 20 taona niainana ny famokarana sy ny fanatsarana ny fitaovana fanandramana ny fizotry ny famokarana ary ny rafitra fitantanana kalitao miantoka ny fahamendrehana sy ny faharetan'ny singa fanotrehana. Ny vokatra namboarina dia nampiasaina tamin'ny orinasa mpamokatra motera lehibe any Shina, ary ny vokatra ampahany dia aondrana any Azia atsimo atsinanana, Amerika Afovoany Atsinanana, Afrika, sns.
Ny famoronana kalitao tena tsara dia ny politikanay momba ny kalitao sy ny foto-kevitray. Manoloana ny fanamby sy ny fahafahan'ny indostrian'ny fiara dia vonona izahay hiara-hiasa amin'ireo mpivarotra ao anatiny sy avy any ivelany mba hahatratrarana tombony sy handresy.
Atrikasa fanariana ho faty ho azy